Waa Maxay Nabad Galiyo Daro, Maxaase Keena? – Rasaasa News
Feb 14, 2012 aan ah, Maxaa Keena Nabad Galiyo Darada?, Nabad galiyo waxaa lagu macnayn karaa dareen Cabsi la, oo ay dadku ku joogi karaan dalka ay degan yihiin iyo jirtaanka sharci ilaaliya nafta iyo hantida dadka.
Nabad galiyo darada dadweynuhu ma doorto, laakiin waa masiibo ay cid abuurto, waana calaamad cabsi iyo farxda la,aaneed oo la darista nolosha dadweyne ku nool dal, cabsidaas oo saamaysa ciroole iyo caruurba.
Nabad galiyo waxaa lagu macnayn karaa dareen Cabsi la,aan ah, oo ay dadku ku joogi karaan dalka ay degan yihiin iyo jirtaanka sharci ilaaliya nafta iyo hantida dadka.
Nabad Galiyo La,aan waxaa lagu macnayn karaa jiritaan dareen cabsi ah, oo ay qabaan dadka ku nool wadan, iyaga oo u cabsada naftooda iyo maalkooda sharci daro jirta awgeed.
Dagaal u dhaxeeya dawlad iyo ururo hubaysan, waxaa lagu macnayn karaa colaad, waxayna abuuri kartaa nabad galiyo la,aan. Ururo siyaasadeed oo sharci daro ah oo dawlad lid ku ah, waxaa lagu macnayn karaa abuur nabad galiyo la,aaneed.
Hadaba muxuu yahay sharcigu?
Sharcigu waa tixo qodobo ah oo la kulmiyey kuwaas oo ilaaliya danta guud iyo xuquuqda gaar ee dadka iyo dalka leeyihiin. Sharcigaas oo ay raali ka tahay bulshadu, una siman tahay.
Nabad galiyo daradu ma aha wadashada hub aan sharciyeysnayn sida qori, mindi, budh ama bayaamin aragtiyeed, sida dad badani u yaqaan, laakiin waa qayb ka mid ah nabad la,aanta.
Nabad galiyo la,aanta ugu xun waa adiga oo ka cabsada awoodda masuuliyiinta dalka aad degan tahay, awoodaas oo uusan jirin sharci kaa difaaci karaa. Waa nabad galiyo la,aan!
Odhaah baa tidhaahda, ‘nabad galiyada laguma keeni karo dambi, waxayse ku timaadaa in loo maro isfaham.’
Marmar badan waxaan argnaa masuuliyiin leh heerar masuuliyadeed oo isticmaalaya awood cadaasi, iyaga oo dadweynaha ay masuulka ka yihiin u isticmaala awood cadaadis iyo cabsi galin sida; xadhig, hanjabaad, cay, shaqo ka caydhin, shaqo u diid iyo bahdilaad.
Masuuliyiintaasi waxay cadaadiska saaraan bulshada qaarkeed iyaga oo sabab ka dhigta hebel ma aqoonsana awoodayda, madaxtinimadayda iyo amarkayga. Waxayna ku tijaabiya awooda dadka ay masuulka ka yihiin, ee nooc walba leh sida; aqoonleyda, caaqilada, shaqaalaha iyo dadka caadiga ah.
Argtidaas cadaadiska ku dhisan, waxay muujisaa kalsooni darada haysata masuulka isticmaala awooda, taas oo ay ka keento fulaynimo ay sababto meeqaanka darajada uu hayo, oo uusan u qalmin ama mutaysan balse ay keentay awood nasiib riixay. Masuulkaasi wuxuu ka wada shakiyaa, dadka oo dhan shacab iyo kuwa la shaqeeyaba, gaar ahaana kuwa Eebe Weyne siiyey kalsoonida cabsi la,aanta oo aan la gaban aragtidooda.
Dabeecadahan cabudhiska waxaa lagu yaqaan kali taliyeyaasha milatariga ee xooga ku qabsada awooda iyo kuwa ay awooda saaraan. Kuwaas oo inta ay awooda haystaan ku jooga cabsi iyo cabsi galin dadka ay masuulka ka yihiin. Cabsida ugu badan ee haysata masuuliyiintaas waa in ay lumiyaan awooda. Laakiin, ma aqoonsana in ayna jirin aduunka guul joogta ah iyo guul daro joogta ah.
Sayyid Maxamed Cabdile Xasan “Bogga laga wareen fuluhu wuu bayggagahayaaye, goortuu bidhaan cadow arkuu balow yidhaahdaaye, in aan mawdka laga baajinayna ba,aha yaw sheega.”
Xaqiiq waxaa ah in awooda bi,naadamku ay kooban tahay, masuul noqoshaduna tahay fursad, awoodaas oo jirta xili kooban kaliya.
Lagama yaabo in cabsida iyo cabsi galintu ay marna dheerayso cimriga masuuliyada shakhsiga, laakiin masuulka ayaa ku sasaba nafta ama ku bogsada in uu xidho ama uu shaqada ka caydhiyo dadka uu isleeyahay awooda ayey kaa rogan karaan.
Masuulka mudan ee sharci ku yimaada awooda, waxay bulshada ka kasbadaan inta ay masuuliyada hayaan magac iyo taariikh wanaagsan oo lagu xasuusto, kolka ay baneeyo jagada masuulnimo.
Masuulka ay fulaynimada iyo kalsooni daradu buux dhaafiso, inta uu masuulka yahay dadku way ka cabsadaan, amaan uusan mutaysan ayaana lagu haraa intuu dhibaato gaysan lahaa. Kolka uu baneeyo jagada masuuliyada uu hayo taariikhdu waxay galisaa baal madow, inta uusan dhimana waxaa qabsada dadkii uu masuuliyada wax ku yeelay.
Dhinaca kale masuulka aan tilmaanay waxaa soo deg degta luminta masuuliyada uu hayo, sababtuna waa abuurida falal nabad galiyo daro sida; xadhig gardaro ah, cabsi galin dadweynaha iyo masuuliyiinta ay shaqadu ka dhaxayso.
Arintaas oo keenta in ay dadku u qaadaan nacayb iyo hoos ka guux aan marka dambe awood kasta oo la isticmaalo aan lagu cabudhin karin.
Xadhig iyo xanuun badan xumaan mooyee xal iyo wanaag midna ma keeno. Wadanigana sharciga dadka ka dhaxeeya kaliya ayaa xidhi kara, kana oofin kara dambiga uu galo.